JILICSANAANTA: SHARAXA, SIFOOYINKA FAA'IIDADA LEH IYO KA HORTAGGA, CUNTADA - SOOSAARKA DALAGGA
Artichoke: waxa ay tahay iyo codsigeeda
Artichoke waa marti aan caadi aheyn oo ka jirta aagahayaga. Beerashada, dabcan, waa suurtagal, tusaale ahaan, xaaladaha aqalka dhirta lagu koriyo, laakiin cimilada dalalkeenu ma qancin khudradda noocan ah ee xaaladaha sii kordhaya. Waxay aad ugu badan tahay waddamada leh cimilada diimeed oo diiran: Isbaanishka, Giriigga, Talyaaniga, Koonfurta Ameerika iyo dalalka kale ee koonfurta. Maqaalkani waxaa loogu talagalay inuu ka jawaabo dhammaan su'aalahaaga ku saabsan artichoke, sifooyinka dawooyinka iyo ka hortagga.
Artichoke ayaa iska leh cirridka dhirta Astrovye. Waxay leedahay inflorescences ee qiyaasta weyn, taas oo ku salaysan qaybo taas oo la wada baabbi'iyey sida cuntooyin kala duwan iyo daawooyinka. Xaqiiqdii, artichoke cuntadu waa buro ubax ah oo aan ubaxin wakhtigii ururinta, dhexdhexaadkeedu wuxuu gaadhay 7.5 cm, oo laga sameeyay miisaanka culus ee qiyaasta weyn.
Ma taqaanaa? Magaca Giriigga ah ee warshadani waa Cynara. - gudaha Tarjumaadda suugaaneed macnaheedu waa "ey", taas oo lagu sharraxayo xaqiiqda ah in miisaanka midhihiisa ay u eg yihiin ilkaha eyga ee qaabkoodu yahay iyo adagaanta.
Kani waa geedo daaqsi leh oo qumman oo toosan. Caleemaha waa mid ballaaran, leh foomka feathery, ayaa lagu daboolaa timaha gaaban ee hoose, ka dhiga meel dufan u dhow xididka.
Aruursiga qaangaarka ee dadka waaweyn wuxuu u muuqdaa mid yaryar sida thistle, maxaa yeelay ubaxiisa waxaa la socda ubaxyada ubaxa guduudan ama midab buluug ah.
By geedo yaryar dilka ah ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah arnica buur, tiarellu, chickweed, beroosh spurge, dacarmariid, in Yeeyi Cunto aconite, kooxda SOS Nemesio, rudbeckia, gelihrizum, Volzhanka, Corydalis, phlox, alyssum, Heuchera, Aster Alpine, dahlias, acanthus,.
Si aad si fiican u fahamto faa'iido-u-helidda farshaxanka jidhka, waa in aad marka hore barato kiimikada kiimikada. Noocyada Artichoke ee ku koray Faransiiska iyo Spain ayaa loo arkaa inay yihiin cunto yaryar oo kalooriye ah waxaana ku jira 47 Kcal oo keliya 100 g. Kalluumeyaal la kariyey ayaa wax yar ka sarreeya marka loo eego soodhada - 53 kcal halkii 100 g.
Ma taqaanaa? Qaar ka mid ah qaarada Australiya iyo qaar ka mid ah dalalka Koonfurta Ameerika, dhirtaas waxaa loo tixgeliyaa cayayaanka oo si wayn loo burburiyaa.
Miraha geedka waxaa ku jira xaddi weyn oo karbohidraat (qiyaastii 15%), borotiinno (3%), dufan (0.1%), iyo sidoo kale fosfatada iyo cusbada kala duwan ee birta iyo calcium. Qaybaha taajirsan ee fiitamiinada ee ku jira qaabka ay ka kooban tahay waxaa ka mid ah fiitamiinada B1, C, B2, P iyo B3, iyo sidoo kale carotene iyo inulin.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ku jira qadar aad u weyn oo ah asiidhyada organic - chlorogenic, glycolic, glyceric, quinic iyo caffeic. Caleemaha lagu dhejiyo lakabka sare ayaa ku jira tiro badan oo ah saliidaha lagama maarmaanka ah oo siinaya miro nadiifin wacan.
Faa'iidooyinka iyo bogsashada guryaha
Mirahaas ayaa muddo dheer lagu yaqaanay sifooyinka bogsashada. Tusaale ahaan, Ruushka qarnigii 18aad waxaa lagula taliyay daaweynta bukaanka cagaarshowga iyo gout, sababtoo ah waxaa la aaminsan yahay in daroogadaasi ay sheegtey qoyaan iyo cholesteretic, taas oo lagu caddeeyay baadhitaan casri ah.
Waxaa hadda la og yahay in dabeecadaha warshadaan ay daadinayaan guryaha marka loo eego beerka, nidaamka biliary iyo kelyaha, taas oo ka dhigaysa qalab aad u fiican baahida loo qabo daaweynta qaloocinta.
Waa muhiim! Si loo helo saamiga ugu badan ee cunista cuntadan, waa in la cunaa sida ugu dhaqsiyaha badan ka dib diyaarinta, sababtoo ah ka dib markii qaar ka mid ah ay inflorescences madow iyo guryahooda faa'iidooyinka hoos u dhaco.
Maraqyada loo yaqaan 'Artichoke' ayaa loo diyaariyay sida ku cad cuntooyinka caanka ah waxay caawiyaan yareynta qandhada uriciska iyo kolestaroolka dhiigga. Waxa kale oo ay awoodaan inay ka saaraan nacasyada xun ee dhididka ah waxaana loo adeegsadaa inay kordhiso awoodda ragga iyo in ay dhiirigeliso jinsiga haweenka.
Artichoke, sababtoo ah dhadhan gaar ah iyo hantida faa'iido leh, ayaa ka helay codsigeeda ma aha oo kaliya in dhinacyada kala duwan ee daawada, laakiin sidoo kale karinta.
Mid ka mid ah kuwa ugu caansan, laakiin codsiyada weli suurtagalka ah ee warshadani waxay u adeegsanayaan sida dalagyada lo'da ee lo'da.
Cuntada loo yaqaan 'Artichoke' waa in la cunaa maalintaas oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaadan bilaabin cunto, weli waa lagama maarmaan in si habboon loo diyaariyo. Waxaa habboon in la bilaabo nadaafadda, taas oo aad u adag oo u baahan xirfado gaar ah.
Wax ka barto isticmaalka cunto kariska, chabra, toon digaag, celery, sverbigi, basal-slyzuna, monarda, rokambolya, plectranthus, momordiki, lagenaria.
Si aad u bilowdo waa in laga saaro dhammaan caleemaha adag ee dibadda iyo villi ee ku haboon iyaga, ka dibna waxoogaa jarjara caleemaha gudaha. Shukulaatada jilicsan ayaa lagu dabooli karaa nooc kasta oo kariska ah: saliid, qashin, walxo, saliin iyo isticmaalaan qayb ka mid ah buuxinta buuxinta for pies, omelets iyo pizza.
Habka ugu fudud waa inuu karkariyo midhaha, ka dib markii loo adeegsan karo saxan kasta.
Waa muhiim! Si aad u ilaaliso farshaxankaaga muddo dheer, waxaa lagula talinayaa in aad ku riddo xal biyo ah oo leh qadar yar oo ah citric acid ama geed isbonji ah mudo ah.
Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, bogsiiyeyaasha dadku waxay isticmaaleen sheygan si ay ula dhaqmaan liiska weyn ee cudurrada kala duwan. Tusaale ahaan, casiirkiisa oo isku dhafan malab si firfircoon ayaa loo isticmaalaa si loo daaweeyo cudurrada kala duwan ee xuubka afka: stomatitis, dilaaca carrabka inta lagu jiro carruurnimada iyo jirro.
Waxaa laga yaabaa in isticmaalka daaweynta duufaanta, oo leh suntan alkaloosho kala duwan iyo dhib ku ah inuu faaruqiyo kaadiheysta. Laga soo bilaabo wakhtiyadii hore Vietnam waxay qiimeeyeen shaaha artichoke ee alaabooyinka faa'iidada leh, sida awoodda ay ku yarayn karto caabuqa xuubka xabka ee caloosha iyo mindhicirada iyo saameynta xanuunka caadada ah.
Awoodda juuska artichoke si loo soo celiyo timaha timaha ayaa la yaqaan taniyo wakhtiyadii hore ee Giriigta. Waxa uu awoodi karaa oo kaliya in uu daaweeyo alopecia horay loo sameeyey, laakiin xitaa si buuxda u daaweyn qaabka horukac ah ee cudurkan.
Daaweynta cudurkan, waxaa lagula talinayaa in aad xoqdo casiirka miraha kuwan xididdada timaha oo aanad u dhaqin dhowr saacadood.
Intaa waxaa dheer, maaskaro leh isticmaalka casiir ah ee warshad this si firfircoon loo isticmaalo cosmetology, sababtoo ah waxay leeyihiin saameyn weyn oo dhalinyarada. Maaskare la mid ah ayaa la samayn karaa iyada oo ku saleysan dhoobada cad sida ku xusan qotada fudud ee soo socda: ka dib markaad isku dhajisid dhoobo biyo, ku dar slurry 20-25 ml of juice artichoke. Maaskarada dhammaatay waxaa lagu talinayaa in lagu daboolo maqaarka wejiga muddo gaaban.
Wixii daaweyn ah ee atherosclerosis, soo saarista artichoke waa mid aad u fiican sida wakiilka choleretic. Wixii soo saaridiisa, waxaad u baahan tahay inaad qaadato 170-200 oo khudrad ah oo dhirta ah oo iyaga lagu shubo Booqday Furimaha Dagaalka ama Blender.
Maaddooyinka kale ayaa lagu dari karaa alaabta la soo saaro si kor loogu qaado guryaha, tusaale ahaan, 20 g sonkor miro, 12 g gaws cagaaran, 8 g gentian, 7 g oo ah miraha fennel iyo 20 g oo ah qashinka la qalajiyey.
Kadibna wax waliba waa in la isku qasan yahay, ku shub 40% khamriga, kuna adkee 2 asbuuc meel qalalan oo heerkul ah + 23-25 ​​° C. Taas ka dib, wax soo saarka ayaa laga nadiifin karaa tuubada waxaana lagu shubaa weel mug leh oo loogu talagalay kaydinta. Soo bixinta sida tan la helay waxaa loo qaataa hadal 1 qaado oo ah 3 jeer maalintii, 1,5 saac kadib cuntada.
Tincture ku salaysan miraha kuwan waxaa loo diyaariyey si la mid ah. Qaado 0.5 kg ee caleemaha qalajiyey iyo buuxin leh 1 litir oo ah 40% khamriga. Marka xigta, u diyaargarow 14 maalmood oo ah meel gudcur leh oo qabow, ka dibna waxaad heli doontaa alaab diyaar u ah.
Qalabkan waxaa lagula talinayaa in uu qaato 3 jeer maalintii, isaga oo gooyey ka hor intaysan codsanayn 100 ml oo biyo ah.
Diyaarinta alaabta ceeriin ee caanaha
Si loo soo saaro alaabta caanaha ceeriin ahaan loo isticmaalo caleemaha iyo inflorescences, qaar dhakhaatiirta dhaqanka qaarkood waxay sidoo kale ku talinayaan in ay ururiyaan xididdada warshadkan, si kastaba ha ahaatee, daraasaadka casriga ah waxay cadeeyeen waxtarnimada daawooyinka laga sameeyay iyaga.
Goosashada qumbaha waxay dhacdaa xilliga gu'ga. Xilliga ugu wanaagsan ee la ururiyo caleemaha waa muddada ubax, halka inflorescences waxaa lagu talinayaa in la ururiyo isla markiiba ka dib markii ubaxyo ay ubaxday. Artichokes wax been ah looma dhigi karo waqti dheer, sidaa daraadeed waxaa lagu talinayaa in la bilaabo samaynta diyaarinta isla markiiba ka dib marka la isku daro, iyo xadiga ayaa la cuni karaa.
Artichoke waxaa ku jira xaddi badan oo polyphenol ah, taas oo kicinaysa dheecaanka iyo kor u qaadista xitaa marin habka biliary ah. Sidaa daraadeed, waxaa lagula talinayaa in aad si taxadar leh u isticmaasho dadka qaba xanuunada cholecystitis, biliary dyskinesia iyo cholelithiasis.
Waa wax aan loo baahnayn in la cuno sawirro dadka loogu talagalay dadka aan u dulqaadan karin khudradda khudradda, gaar ahaan qaabkeeda ka weyn, sababtoo ah caleemooyinkeeda waxaa ku jira xaddi badan.
Hase yeeshee, farshaxanada yar yar ee cabbirka yar ma laha hanti isku mid ah, oo si ammaan ah ayaa loo wada baabbi'in karaa. Intaa waxaa dheer, khudraddan ayaa awood u leh inay hoos u dhigto cadaadiska, sidaa darteed dadka qaba cududda qalafsan, waxaa lagu talinayaa in laga fogaado isticmaalka sheygan.
Dadka qaba xasaasiyad cuntooyin kala duwan iyo alaabo kale oo ka mid ah badeecadan ayaa si adag loo mamnuucay in ay u adeegsadaan cunto ahaan.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawiyey inaad ka jawaabto su'aalahaaga ku saabsan artichoke iyo faa'iidadiisa caafimaad. Si taxaddar leh u akhri liiska khilaafaadka isticmaalka, ka hor intaanad go'aansan inaad isticmaasho qalabka ama aad cunayso saxan. Cunto iyo cunto xumo!